Yakakwira-Yemhando Yakakwira Yekumhanya Njere Pepa Cup Kugadzira Muchina fekitori uye vagadziri | Chengda Machinery
Yekumhanyisa Yehungwaru Pepa Mukombe Kugadzira Machine
Iyo Shunda SMD-90 yakangwara bepa mukombe muchina uri kushandisa desktop dhizaini, iyo inoparadzanisa zvikamu zvekutepfenyurisa uye mafuru.Izvo zvikamu zvekutepfenyura zviri pasi petafura, mafuru ari padhesiki, chimiro ichi chakanakira kuchenesa uye kugadzirisa.
Muchina unotora otomatiki kupirisa lubrication, longitudinal akabatana hutachiona chimiro, dhiramu mhando cylindrical indexing mashandiro uye giya dhiraivha, kuona kudzikama uye mhando yemuchina wese.
Kune emagetsi zvikamu, PLC, photoelectric kuteedzera uye servo kudyisa zvinoshandiswa kudzora kumhanya. Iyi mhando yemuchina kugona inosvika 100-120pcs makapu / min, yakakodzera kugadzirwa kwema4-46 maununisi echando / anopisa makapu.
Zvokuimba Quality Guarantee
1.Mechanical zvikamu zvakavimbiswa kwemakore matatu, zvikamu zvemagetsi zvakavimbiswa kwegore rimwe.
2.Zvose zvikamu zviri patafura yekuumba zviri nyore kuwana zvekuchengetedza.
3.Zvose zvikamu zviri pasi pekuumba tafura zvinogadzirwa nemafuta ekugeza. Oiri inofanira kuchinjwa mwedzi yega yega 4-6 nemafuta akataurwa.
1.Production kuburitsa inosvika zviuru makumi mashanu emikombe pashifti (maawa masere), inosvika mamirioni 4.5 makapu pamwedzi (3 mashifiti);
2.Percentage yekupfuura yakakwira kupfuura 99% pasi peyakajairika kugadzirwa;
3.One opareta anogona kubata akati wandei michina panguva imwe chete.
Vertical shaft gear drive, cylindrical barrel indexing cam, gadzirisa yemukati dhizaini, kuve nechokwadi chekufambisa kwemuchina, kuita kwakapindirana kwepamusoro, kuitira kuti uwane kufambidzana pakati penzendo kuti udzivise kukanganisika zvikamu, gadzira cheni yekutyaira jitter uye kufambisa haina kutsetseka Congenitally inoshaya.
Kwose Kwakawanda Nyaya Yemamiriro
Iyo muchina yakavharika dhizaini dhizaini, kudira mafuta ekupfapfaidza lubrication, kudzora kupfeka uye kubvarura, inoshanda kupisa kupisa, muchina unomhanya nekukurumidza. Iyo muchina garandi kwemakore matatu.
Mbiri Curling Institutions
Yekutanga kupetwa nekuwedzera kwemukati kweiyo rotary kuumbwa, inobatsira kugadzirisa iro pepa rinoumba simba; yechipiri kukotamisa kupisa stereotypes, rakakura vhoriyamu, kuenzana kugadzikana.
CCD mufananidzo system
Kuonekwa kwemukombe (mbiya) pamberi peiyo vhoriyamu uye nenzvimbo yemukati yechitema, humhutu, mapini, kupeta muromo kuputika, kuunyana. 2, yekucherechedza mukombe (mbiya) kumusana kwepazasi uye nzvimbo dzakakombama dzedonhwe, humhutu, pinholes, knurled flanging, kupera kwebepa rinopisa yero, crescent pasi, panoperera mapepa mapfundo.
Akangwara kudzora system
1, yakawanda-modhi furemu. Shandisa iri nyore windows kukurudzira kutungamira, sarudza iyo seti modhi.
2, inochinja paramende marongero. Unogona kutsigira, kudzorera, kana kudzorera paramende kufekitori. Iwe unogona zvakare kugadzirisa paramende nemaune zvakadzama.
3, inoshanduka encoder mavambo marongero uye nongedzo otomatiki marongero uye kukanganisa kuzviongorora. Encoder yekumisikidza Hardware haidi kufunga nezvenzvimbo, unogona kungoisa software.
4, otomatiki gadzirisa iyo yekupaka bit, isingasviki pamakumbo imwe nekukurumidza pasi pasi. Kana yagadziriswa, muchina unobva waverenga iyo inertia daro remuchina, nhanho imwe nekukurumidza kupfuura chinzvimbo mushure mekudzikisira.
5, iyo system yekiyi chiteshi sensor chiratidzo otomatiki kuverenga uye kuzivikanwa. Kuburikidza nekuvhiya kuri nyore kutanga bhatani kunogona kusangana nako mukugadzira kukundikana, iyo sisitimu inoteedzera yega chiratidzo ichi maererano neiyo sensor, iyo mold yakakurumidza kumira pakati peyaviri maheater.
6, mira mukombe ubviswe. Mushure mekumiswa kwemuchina zvisina kujairika, sisitimu inozobvisa hita uye chinzvimbo chebracket nekuda kweheater yakatsva uye yekunamatira haisi mukombe wakasimba.
7, kupisa sisitimu inodzora tembiricha kutonga. Kuburikidza nePCC PID yekudzora tembiricha, mushandisi anongosarudza iyo inogadzira mapepa, huremu, kuroora / kaviri PE, iyo sisitimu inozoisa yega tembiricha inoenderana, uye muchina kumhanya kunochinja kana tembiricha tembiricha yagadziriswa. Mushandisi anogona zvakare kugadzirisa iyo yakatarwa tembiricha yekudzora curve.
8, inoonekwa system kutadza kuona. Otomatiki kuzivikanwa kwepepa mukombe chimiro, zvemukati, zvepasi zvikanganiso, otomatiki kubvisa. Yakasarudzika algorithm, mwenje grey stain kuzivikanwa kwakaringana uye kugadzikana. Kiyi yekukurumidza kuseta parameter, asi zvakare inogona kugadzirisa imwe paramende zvakadzama. Iyo sisitimu inotsigira yemukati network yekutarisa yakabuda mushumo.
9, Hardware yekutarisa system. Plc kuburitsa mapoinzi, kudzosera, vanobatika, plc uye yekubata skrini, plc uye komputa, plc nekuwedzera kwetambo chaiyo-nguva yekutarisa, isina kujairika alarm mune yekubata skrini inokonzeresa chikonzero chekusashanda. Yakadzama Hardware uye software kutadza ruzivo, mushandisi zvinoenderana nekukurudzira kuti nyore kugadzirisa.
10, iyo system inotsigira kure kusimudzira. Plc uye inobata skrini kuburikidza neepamusoro-yekumhanya Ethernet yekubatanidza, iwe unogona kugadzirisa iyo plc uye inobata skrini ip kero, kuburikidza neNAT kana vamwe vanopa sevhisi kuti vasimudze vari kure.
Pashure: Pepa fan / pepa pepa / mupumburu wepasi pepa repepa kapu
Zvadaro: STD-80 Yakatwasuka Mukombe Muchina
SMD-90 Pepa Cup Muchina